Khal Khalka Kooxda TPLF oo Gaadhay Meel Halis Ah & Hoos Kooda oo Ay Kadidayaan | ogaden24
Khal Khalka Kooxda TPLF oo Gaadhay Meel Halis Ah & Hoos Kooda oo Ay Kadidayaan
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya khal khalkii ugu waynaa oo soo food saaray taliska wayaanaha iyo amaanka magaalada iyo deegaanada kuxeeran oo aad usii xumaanaya.
Sida xogta aan kuhelayno ciidamada wayaanaha ayaa maalin nimadii shalay ilaa xalay xidhay wadooyinka waawayn ee magaalada Addis Ababa soogala ama kabaxa, waxayna ciidamadu siwayn ubaadhayeen dhamaan baabuurta magaalada soogalaysa iyo kuwa kabaxayaba.
Goob jooge kusugan magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in uu arkayay ciidamo aad ubadan oo dhulka dhigaya rarka ay baabuurtu wadaan iyagoo dadkana mid mid ubaadhaya, sidoo kale goob joogaha ayaa sheegaya in ay ciidamadu dadka iyo wadayaasha gaadiidkaba waydiisanayeen lacago baad ah iyagoo dhahaya cidii lacag bixisa ayaan siidaynaynaa.
Talaabadan ay qaadeen ciidamada wayaanaha ayaa muujinaysa khal khalka kooxda TPLF iyo cabsida ay kaqabto in xukunka laga tuuro isla markaana ay kacdoon wadayaashu saamayn wayn kuyeeshaan magaalada caasimada ah ee Addis Ababa.
Taliska wayaanaha ayaa gabi ahaanba kaquustay gacan kuhaynta iyo kantaroolida gobolada wadanka wuxuuna talisku mashquul kuyahay sidii uu u hanan lahaa amaanka magaalada Addis Ababa oo ah meesha ay taalo caloosha taliska wayaanaha.
Isku soo wada duub oo khalkhalka kooxda TPLF oo hada noqday mid waali ah ayaa umuuqda mid aan laga bogsoon karin, waxayna kooxdu gaadhay heer ay kuwa u adeega aamini waayaan.